आफ्नो फेसबुक अरुले चलाइरहेको त छैन ? यस्तो छ थाहा पाउने उपाय
August 13, 2020 1855
सूचना प्रविधि र इन्टरनेटको विकासले आम’मानिसलाई सामाजिक सञ्जालको लत नै बसिसकेको छ ।
आक्कल झुक्क’ल मानि’सहरु मात्रै सम्भवतः सामाजिक सञ्चाल फेसबुकको पहुँच भन्दा बाहिर होलान् । फोटो, भिडियो पोष्ट गर्नेदेखि भिडि’योमा समेत कुरा’कानी गर्न मिल्ने भएपछि मानि’सहरु हिजोआज इन्टरनेटको पहुँ’चमा हुँदा मोबाइलमा भन्दा पनि फेसबुकबाटै कुरा’कानी गरेको पाइन्छ ।
धेरैको गोप्य कुराकानी र कारोबार समेत फेस’बुकबाट हुने गरेका छन् । तर प्रयोगक’र्ताहरुले कयौँपटक आफ्नो फेसबुक लगआउट गर्न बिर्सिदा डाटा चोरी हुनेदेखि असुरक्षा’सम्मका समस्या पनि निम्तिने गरेका छन् ।
कतिपय अवस्थामा त जानाजानी ह्याक’रहरुले फेसबुक उनिहरुको नियन्त्रणमा लिने समेत गरेका छन् । यो अवस्थामा आफ्नो फेसबुक कहाँबाट लगइन भइरहेको छ भनेर थाहा पाउँदा पनि केही गर्न सकिने अवस्था छ ।
कसैसँग आ’फ्नो अकाउन्टको पास’वर्ड भएर आफ्नो फेसबुक नै दुरुपयोग गरिरहेको पनि हुन सक्छ । यो अवस्थामा आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट कहाँ-कहाँ लगइन भएको छ भनेर आ’फैंले थाहा पाएर सम्भावित दु’रुपयोग रोक्न पनि सकिन्छ ।
– सबैभन्दा पहिले प्रयोग’कर्ताले आफ्नो अकाउन्ट ओपन गरेर यसको सेटिंग्समा जानुपर्ने हुन्छ । सेटिंग्स अप्शन खुल्ने बित्ति’कै यूजर अघि देब्रे साइडमा कयौं अप्श’नहरु देखिने छन् ।
-यसैमध्ये प्रयोग’कर्ताले दोस्रो नम्वरमा सेक्यो’रिटी एन्ड लगइनको अप्शन पाउने छन् । यसमा ट्याप गर्दा यूजर अगाडि एक पेज ओपन हुनेछ । यस पेजमा ह्वेर यूआर लग्ड इन अप्शन पाइनेछ । यस’मा यूजरले आफ्नो अकाउन्ट लग इन भए’को डिभा’इसहरु देख्न सक्द’छन ।
-यसबाहेक यी डिभाइसहरुसँगै यूज’रलाई टाइम पनि देखिने छ, जसबाट यूजरले यी डि’भाइसमा कति बजे वा कति समयसम्म लगइन रहेको हेर्न सक्दछन् ।
– यसरी यूजरले आ’फ्नो फेसबुक कहाँ/कहाँबाट लग’इन छ भन्ने थाहा पाउन सक्दछन् । यसैमा लगइन भएको डिभाइसको अगा’डि तीन डट देखिन्छ । जहाँ ट्याव गर्दा यूज’रले लग आउटको अप्शन पाउने छन्।
– यसबाहेक यूजरले सबै डिभा’इसबाट एकै’साथ लगआउट गर्न चाहेमा यसैको तल्लो’ भागमा ‘लग आउट अफ अल सिजन’ मा ट्याव गर्नुपर्दछ । यसबाट यूजरको कहिँपनि चलिर’हेको फेसबुक अ’काउन्ट लगआउट हुनेछ । – खबर हब
Prev४ बर्ष भित्र कुलमान घिसिङका चर्चित यी १८ काम (भिडियो सहित) ….शेयर गर्नुहोला
Nextह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, आज कति पुग्यो तोलाको ? हेर्नुहोस्…
आज एकैदिन २८८ जनामा कोरोना पुष्टि
सलमान खानले लाखौं कोशिस गर्दा पनि बचा’उन सकेनन् अभिनेता फराज खानलाई
गाउँका सबै’लाई लाग्यो कोरोना तर अचम्म! एक्लो भूषण-लाई मात्रै छुन सकेन कोरोनाले…
दुःखद खबर – पानीमा डुबेर ३ वर्षे बालकको गयो ज्यान…
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (110249)
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (109161)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (92250)
सुन्दर युवती र नेपाल आर्मीका सिपाहीको यो भाईरल भिडियो लाखौंले हेरे (भिडियो सहित) (91130)
बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ( हृदयस्पर्शी कहानी) (85413)
फिल्मी हिरो हिरोइनलाई टक्कर दिने नेपाल प्रहरीको यो डान्स (हे`र्नुहोस् भिडियो) (80346)
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (78350)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (78119)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (72465)
स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (69924)